ဆောင်းနှင်းတွေကို ကြိုဆို ပွေ့ဖက်ခြင်း
အေးမြမှုတွေကို ခေါ်ဆောင်လာတော့မယ့် ဆောင်းကို ကြိုလင့်လို့နေပါပြီ။ အလစ်ချောင်းနေတဲ့ မြောက်ပြန်လေညင်းလေးက တစ်ခါတလေ ရင်ထဲကို သဲ့သဲ့လေး တိုးဝှေ့ကျီစယ်လို့ပေါ့၊ တစ်ခုသတိထားမိတာက တစ်ခါတလေ မနက်ခင်းတွေမှာ မြင်တွေ့လာရတဲ့ မြက်ပင်လေးတွေရဲ့ ဦးခေါင်းထက်က ပုလဲသွယ်လေးတွေပါပဲ၊ ဒါဆို ဆောင်းဟာ ကျွန်တော်တို့တစ်တွေရဲ့ လက်တစ်ကမ်းလိုမှာ ရောက်ရှိနေပြီဆိုတာ အသေအချာပါပဲ၊ ဟိုတစ်လောကပဲ သူငယ်ချင်း စာရေးဆရာတစ်ယောက် နှင်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ရသတစ်ပုဒ်ရေးသွားသေးတယ်။ အင်းလေ သူအိမ်ထောင်ကျရာဒေသက နှင်းတွေဘယ်လိုကျလို့ ဘယ်လိုအေးစိမ့် နေမှန်းမှမသိတာ၊ ကျွန်တော်တို့ အညာဒေသမှာတော့ ခုလိုအချိန်အခါမှာဆိုရင် နှင်းမှုန် နှင်းငွေ့လေးတွေကို တဝကြီး ငေးမောကြည့်ရဖို့ မလွယ်ကူသေးပါဘူး၊ အဲဒီလို မညီညာတဲ့ ဆောင်းဖြစ်ခြင်းတွေကပဲ ကျွန်တော့် ဘဝင်အရှိုက်ကို တိုက်ခိုက်လာတယ်လို့ပြောရမလား၊ ဒါကလည်း ဆောင်းနဲ့ ပတ်သက်ရင် ခြေတစ်လှမ်း နောက်ကျတတ်တဲ့ အညာဒေသရဲ့ ဆောင်းဖြစ်ခြင်းတွေပါပဲ၊
ကျွန်တော်ကတော့ ဆောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး အပိုင်ကန်သွင်းခွင့်တွေကို ဖြုန်းတီးမပစ်ချင်ဘူး။ ဆောင်းနဲ့အတူ ကြွေဆင်းလာတဲ့ အတွေးစတွေကို အလကား လွှတ်ချဖို့ မဖြစ်နိုင်ဘူး။ နောက်ပြီး လတ်တလော အမြဲတမ်း မြင်တွေ့ ခွင့်မရနိုင်သေးတဲ့ ဆောင်းနှင်း ဖြူဖြူလေးတွေကို ဒီအတိုင်းကားလိပ်ချပြီး ချန်မထား ရစ်ခဲ့နိုင်ဘူး။ သေချာတာကတော့ ကျွန်တော့် စိတ်ကူးယဉ်အတွေး ကမ္ဘာထဲကို မဖြစ်မနေအလည်လာခဲ့ဖို့ တောင်းဆိုရမှာပါပဲ။ အခုလည်း ကျွန်တော် ဆောင်း သီချင်းလေးတွေကို ထွေလီကာလီရှာဖွေ နားဆင်နေမိတာပေါ့။ တစ်ခါတလေတော့လည်း ဆောင်းကဗျာလေးတွေကို အေးအေးလူလူ ရေးဖွဲ့နေမိသေးတယ်၊ နောက်ပြီး ဆောင်းနဲ့ဆက်စပ်တဲ့ ကဗျာလေးတွေကိုပါ တစိမ့်စိမ့် ရွတ်ဆိုနေမိခဲ့တာပေါ့၊ ကျွန်တော်ရွတ်ဆို နေမိတဲ့ ကဗျာလေးတစ်ပုဒ်က ကဗျာဆရာသာကီနွယ် (နတ်မောက်) ရဲ့ ကဗျာလေးတစ်ပုဒ်ပါပဲ၊ ကဗျာခေါင်းစဉ်က “ဆောင်းငယ်” တဲ့ . . . ။
ဪသာ် . . .
ဪ . . .
သည်ဆောင်းခြေလှမ်း စပြီကိုး။ ။
ဒီကဗျာလေးကို ရွတ်လို့အပြီး ကျွန်တော် တစ်ခုခုကို ခံစားလိုက်ရတယ်။ နောက်ပြီး ဒီကဗျာလေးထဲက အအေးဓာတ်ကပါ ကျွန်တော့်ဆီကူးစက်လာခဲ့တယ်။ နောက်ပြီး ဆောင်းဦးရာသီရဲ့ စတင်ခြင်း အငွေ့အသက်တွေကိုပါ ကျွန်တော်ခံစားလိုက်ရတယ်။ မြန်မာဂန္ထဝင်ကဗျာတစ်ပုဒ်ဖြစ်တဲ့အလျောက် အလင်္ကာ ဆိုတဲ့ ဂုဏ်ပုဒ်နဲ့အညီ စမ်းချောင်းလေးတစ်ခုလို တငြိမ့်ငြိမ့် စီးဆင်းသွားတာကိုပါ ခံစားလိုက်ရတယ်။ ဟုတ်ပါတယ် ... ကျွန်တော်တို့တစ်တွေဟာ ဆောင်းရဲ့ မျက်စိအောက်မှာ ပြေးလွှားဆော့ကစားခဲ့ကြဖူးသလို ဆောင်းရဲ့ ညဉ့်နက်နက်တွေထဲမှာ တေးဆိုခဲ့ကြဖူးပါလိမ့်မယ်။ ဒါတင်မကသေးပါဘူး၊ ဆောင်းရဲ့ မနက်ခင်း တွေအောက်မှာ ပြေးလွှားခုန်ပေါက်ခဲ့ကြဖူးပါလိမ့်မယ်။ အဲဒီလို ဆောင်းတွေ ဆောင်းတွေကို အခါခါအလီလီ ဖြတ်သန်းနေထိုင်ကြရင်း ဆောင်းကို ထိတွေ့ ရင်းနှီးခွဲခွာကြရတဲ့အချိန်အခါတွေကလည်း မနည်းမနောပါပဲ။ ဒါပေမဲ့ ကံမကုန်ရင် ပြန်ဆုံကြရတယ်ဆိုတဲ့ စာသားလေးလို ကျွန်တော်တို့တစ်တွေ ဆောင်းနဲ့ ကံမကုန်လို့ ပြန်ဆုံကြတော့မယ်လို့ သဘောထားလိုက်တော့မယ်။ တစ်ခါတလေ ဆောင်းရဲ့ နေခြည်နုနုလေးတွေကို တခုတ်တရ ဖက်တွက်တတ်ကြသေးတယ် မဟုတ်ပါလား။ နောက်ပြီး ဆောင်းရဲ့ သင်္ကေတလေး တွေဖြစ်တဲ့ သိုးမွေးခေါင်းစွတ်လေးတွေ၊ ခြေအိတ်လှလှလေးတွေ၊ လက်အိတ်လှလှလေးတွေ၊ ဆွယ်တာအင်္ကျီလေးတွေ၊ ဆွယ်တာတဘက်ကလေးတွေကလည်း ဆောင်းရဲ့ အမှတ်တံဆိပ်တွေပဲ မဟုတ်ပါလား။ အဲဒီလို ဆောင်းရဲ့ အလှအပတွေကိုပဲ ကျွန်တော်တို့တစ်တွေ ရင်ခုန်လှိုက်မောခဲ့ကြရတယ်လေ။ ကြင်နာယုယခဲ့ ကြရတယ်မဟုတ်ပါလား။ တစ်ခါတလေ မြစ်ထဲကနေ ရုန်းထလာတဲ့ ရေခိုးရေငွေ့ကိုငေးကြည့်ရတာလည်းအမောသား။ ဒါတင်မကသေးဘူး ရေပေါ်ယှက်ပြီး ပြေးနေတဲ့ ပိုးကောင်ဖွေးဖွေးလေးကို ကြည့်ရတာလည်း အလှတစ်မျိုး၊ ဒါကလည်း ငယ်ငယ်တုန်းက မနက်လင်းရင် မြစ်ထဲမျက်နှာသစ်သွားရင်း တွေ့ကြုံရတဲ့ မြင်ကွင်းလေးတွေပါပဲ။ ပြန်တွက်ကြည့်ရင် ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုတောင် ကြာလာခဲ့ပေါ့။ ဒါပေမဲ့ ဆောင်းရဲ့ ယဉ်ကျေးမှုအနုပညာတွေက ခုထိအမှတ် ရစရာကောင်းနေဆဲပါပဲ။ ပြောမယ့်သာပြောရတာပါ၊ ဆောင်းက ခုချိန်ထိ မထိတထိလုပ်နေတုန်း။ ကျွန်တော်ကသာ ကြိုးဝိုင်းထဲကလက်ဝှေ့သမားလို ဟန်ရေးပြနေတာ၊ ကျွန်တော်ကသာ အပြောတွေ ရွက်နုတထိုးထိုး လုပ်နေရတာ၊ ဆောင်းကတော့ အိပ်ပျော်လို့နေတုန်း၊ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ကျွန်တော် ဆောင်းကို အမွှမ်းတင်လို့ ကောင်းနေတုန်းပါပဲ။ အဲဒီလို အတွေးတွေကို စိန်တစ်ရစ်၊ မြတစ်ရစ် တွေးတောနေမိတာပေါ့။ ကျွန်တော့်ကို ဆောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး အမှတ်တရလေးရှိရင်ပြော ပြပါလို့များ မေးလာခဲ့ရင် ကျွန်တော့်မှာ ဆောင်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ထူးထူးခြားခြားမရှိလှ။ ဥပမာ - ကောင် မလေးတစ်ယောက်နဲ့ ဆောင်းနှင်းမြူတွေကြား လျှောက်လည်တဲ့ အမှတ်တရမျိုး၊ နောက်ပြီး ဆောင်းမှာအသုံးတဲ့မယ့် အစားအသောက် အဝတ်အစား အသုံးအဆောင်တွေကို လက်ဆောင်ရတာမျိုး အို ... ဘာဆို ဘာမှမရှိပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော့်မှာ ဆောင်းရဲ့အမှတ်တရတွေ မရှိနိုင်ပေမယ့် အခြားသူတွေမှာတော့ ဆောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး အမှတ်တရတွေ တစ်ခုမဟုတ် တစ်ခုတော့ ရှိနေနိုင်တယ်မဟုတ်ပါလား။
ဆောင်းဟာ ကြည်နူးစရာကောင်းသလို လွမ်းဆွတ်စရာလည်း ကောင်းလှပါတယ်။ အေးမြခြင်း၊ တိတ်ဆိတ်ခြင်း၊ လွမ်းဆွတ်ခြင်းတွေ ထုံလွှမ်းထားတဲ့ ဆောင်းညတွေကို ကျွန်တော်တို့တစ်တွေ ဖြတ်သန်းခဲ့ဖူးကြလိမ့်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ ဆောင်းဟာ အေးမြခြင်းသက်သက်ပဲလား။ အဲဒီလိုတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ဆောင်းမှာ ကျွန်တော်တို့တစ်တွေ ရှိနေနိုင်သလို ကျွန်တော်တို့တစ်တွေရဲ့ ရင်ထဲမှာလည်း လှပတဲ့ ဆောင်းတွေ ရှိနေနိုင်ပါသေးတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ရင်ထဲမှာလည်း ဆောင်းနဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ အမှတ်တမဲ့ သီအိုရီတွေ၊ အမှတ်တရ Data တွေလည်း ရှိနေနိုင်ပါသေးတယ်၊
အဲဒီကနေမှ ဆင့်ပွားကူးစက်လာတာက ဆောင်းရဲ့အမှတ်တရလက်ဆောင်လေးတွေကို ကိုယ်ခင်မင်မြတ်နိုးရတဲ့သူတွေဆီကို နွေးထွေးမှုသင်္ကေတအဖြစ် လက်ဆောင်ပေးတတ်ကြပြန်တယ်လေ။ ဒါကလည်း ဆောင်းရဲ့ သင်္ကေတထဲက တစ်ခုမဟုတ် တစ်ခုခုပေါ့။
ဆောင်းရဲ့ မြင်ကွင်းတွေဟာ အမြဲတမ်း လတ်လတ်ဆတ်ဆတ်ပါပဲ။ အေးမြမှုတွေထဲက ဖြစ်တည်လာတဲ့ နွေးထွေးမှုတွေက ဆောင်းရဲ့ ရသတစ်ခုပါပဲ။ တစ်ခါတလေ အအေးလှိုင်းဖြတ်မယ်လို့ သတင်းတွေ့ လိုက်ရတဲ့အခါတွေဆိုရင် ဘယ်လောက်များ အေးခဲသွားမှာလဲ တွေးကြည့်နေမိသေးတယ်။ ဘယ်လိုပဲ ပြောပြော တစ်ချိန်က ဆောင်းညတွေရဲ့ ငယ်ဘဝ လွမ်းစရာ ပုံရိပ်ဟောင်းတွေကိုတော့ နှလုံးသားဝက်ဘ်ဆိုက်ကနေ ရှာဖွေနေမိတယ်၊ ကျွန်တော်လေ ဆောင်းရဲ့ ရင်ငွေ့သံစဉ်လေးတွေထဲမှာ မှေးစက်ခိုဝင်ခဲ့ဖူးတယ်။ အဲဒီ ဆောင်းကပေးလိုက်တဲ့ အနုပညာလက်ဆောင်လေးတွေကြားမှာ ဆွေးမြည့်နာကျင်ခဲ့ရဖူးတဲ့ အချိန်တွေတောင် ရှိခဲ့ပါသေးတယ်။ အဲဒီလို စူးရှနာကျင်ခဲ့ရတိုင်း ဆောင်းသီချင်းလေးတွေနဲ့ ဆေးထည့်ဖြေသိမ့်ခဲ့ဖူးတယ်၊ နောက်ပြီး ဆောင်းမှာကြွေနေတဲ့ သစ်ရွက်ဝါလေးတွေကိုလည်း ငေးငိုင်ပြီး အတွေးခန်းဖွင့်နေမိတဲ့ အထိပါပဲ။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပါလေ ကျွန်တော့်ရဲ့ရင်ထဲမှာ ဆောင်းတွေဖြစ်တည်လာတော့မှာဖြစ်သလို သင့်ရဲ့ ရင်ထဲမှာ ဆောင်းတွေ၊ ဆောင်းတွေ ဖြစ်တည်လာခဲ့ တော့မယ်မဟုတ်ပါလား။ အိုကေ ဒါဆိုရင် ကျွန်တော် တို့တစ်တွေ တစ်ချက်လောက် ဆောင်းနှင်းတွေကို ကြိုဆိုပွေ့ဖက်ကြရအောင်လားဗျာ။ ။